Bilaaw barashada iswiidhishka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan ahay qof magan-galyo doon ah / Baro iswiidhish / Bilaaw barashada iswiidhishka
Meeshaan waxaad ka heli barnaamishyada oo telefoonka gacanta(appyada), filimyo iyo boggaga internetka oo adiga isticmaalikartid sideey barashada iswiidhishka kugu bilaabato.
Waxaa lagugu salaamay iswiidhish (Hejsvenska 1)
Dhanka Waxaa lagugu salaamay iswiidhish (Hejsvenska 1) waxaad ku baranaysaa kelmadaha ugu horeeya iyo erayada iswiidhishka. App-kan wuxuu leeyahay toban mawduuc. Ku tababaro kolba hal mawduuc oo ah habka aad doonaysid inay u kala horeeyaan. Waxaad app-kan ku soo dejisan kartaa moobilkaaga. App-kan magaciisu waa Waxaa lagugu salaamay iswiidhish (Hejsvenska 1). Waxaad isticmaali kartaa adigoo aan intarnatka haysan.
Warbixin ka soo gudbi adiga qofka aad tahay
Waa imisa saacaddu?
Wadahadal xaalad adag oo degdeg ah